Maalinta: Meey 3, 2018
Caruurta Wadooyinka Taraafikada ee Shaqada
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara 23. Xubnaha Golaha Caruurta ee mudadaas, oo ay weheliso kooxaha booliiska taraafikada, 15 Luulyo Bisha Cas ee National Will Square ayaa xakameysay taraafikada. Si kor loogu qaado wacyiga sharciyada taraafikada, [More ...]
MMO waxay soo bandhigtay Warbixinta Siyaasadaha Gaadiidka iyo Gaadiidka
Rugta TMMOB of injineerinka injineeriyada (MMO), oo la cusbooneysiyo labadii sanaba mar ee Qorsheynta Gaadiidka iyo Wadooyinka Gaarka ah ee loo Baahan Yahay Warbixinta Rugta ayaa si buuxda u qiimeysa siyaasadaha gaadiidka. Tixgalinta maaddada ka jirta dalkeena, marka loo eego sanadaha iyo noocyada gaadiid [More ...]
Bostan Dudullu Tareenka Tareenka
Ka shaqeynta Bostancı Dudullu Howlaha Metro: Dudullu Bostancı Metro Line, oo ka kooban saldhigyada 13 guud ahaan, shaqadu si dhakhso leh ayey u socdaan. Khadka Nidaamka Tareenka Dudullu Bostancı waxaa loo qorsheeyay in laga dhiso dhinaca Anatolian ee Istanbul. [More ...]
Tareenka Adapazarı-Istanbul Ekspress Train wuxuu joojin doonaa Kartepe
Kadib shaqadii Duqa Magaalada Kartepe Hüseyin Üzülmez ee Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, Adapazarı-İstanbul Express Train wuxuu bilaabay inuu istaago Köseköy. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in tareenka Adapazarı-İstanbul Express uu bilaabi doono inuu istaago Kartepe natiijada ka dhalatay dadaalada awgood. [More ...]
Xilliga Internetka ee bilaashka ah ee Isttemen Station
ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya brand shidaalka Turkey ee Aytemiz, sii wadaan in ay qaataan hal-abuurnimo. Waxaa lagu sharfay qaybta adeegyada horudhaca sida Biker Friendly Station, Bixinta Gawaarida iyo bixinta degdega ah ee gawaarida korantada [More ...]
Xarunta Horozkoy Station
Degmada Yunusemre waxay dib u soo celisay Saldhigga Tareenka ee Horozköy Faransiiska waxayna u beddeshay xarun dhaqan iyo bulsho. Xarunta lagu magacaabo Hanımlar Lokali, koorsooyin kala duwan ayaa la bilaabay in la bixiyo iyada oo lala kaashanayo Xarunta Waxbarashada Dadweynaha (HEM). [More ...]
3 ee KBU. Golaha Wakiillada Caalamiga ah ayaa bilowday
3, oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda Karabük University Plus Career Club ardayda. Isagoo ka hadlayay International Trade Congress AK Party Istanbul ash-xigeenka Text ka, ganacsiga adduunka Turkiga, gaar ahaan qarnigii cusub maalgelinta kaabayaasha cusub iyo shabakadaha gaadiidka si ay u [More ...]
Tareenka rakaabka ee TCDD, oo dhexmara Adapazarı, Mithatpaşa, İzmit iyo Pendik, wuxuu bilaabay inuu ka qaado rakaab ka socda xarumaha Köseköy iyo Büyükderbent. Safarka TCDD ee Ankara si loo gaabiyo safarka u dhexeeya Istanbul [More ...]
ASAT ilaa adeegga Manafgat Asphalt iyo Adeega Kaabayaasha
Antalya Dawlada Hoose ee ASAT Kooxaha Agaasimayaasha guud, Manavgat dhanka kale inta ay xalinayso dhibaatooyinka kaabayaasha dhanka kale waxay kahadleysa wadooyinka ay qariyeen mudada shaqada. Agaasinka guud ee ASAT, biyaha la cabo ee bartamaha iyo degmooyinka, [More ...]
Xarunta Tababbarka Taraafikada ee Ankara ayaa sugeysa martigalinta yaryar
Xarunta Ankara ee Magaalaga caasimada oo dib u cusbooneysiisay xarunta tababarka taraafikada ayaa albaabada u furtay ardayda dhalinyarada ah Xarunta tababarka wadooyinka ee Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara, oo caruurta siisa waxbarasho lacag la’aan ah shuruucda wadooyinka, ayaa gabi ahaanba la dayactiray. Sida la cusbooneysiiyay [More ...]
Ankaray, oo si weyn hoos ugu dhigtay rarida gawaarida Ankara, ayaa sanado badan u adeegaysay dadka deggan Ankara. Khadka Ankaray halkaas oo celceliska adeegga 23 maalinlaha ahi uu socdo inta udhaxeysa AŞTİ iyo Dikimevi oo joogsanaya Söğütözü iyada oo loo dhigayo xNUMX tareenka, [More ...]
RayHaber 03.05.2018 Warbixinta Shirka
Mashiinka Tareenka Mashiinka Birta ayaa la Sameyn doonaa Adeegga Shaqaalaha waxaa laga qaadi doonaa TCDD 2. Veroical Hydraulic Shock Absorber, Horizontal Trans Sho Shong Absorber wuxuu helayaa Adeeg Caymiska Waxaa laga heli doonaa Wagon [More ...]
Khudbaddiisii ​​uu ka jeediyay Madasha Wadada Caalamiga ah ee silk Road ee ku taal Wadada Horumarinta cusub ee Ahmet ee lagu qabtay Xarunta Avaza Congress, Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, wuxuu cadeeyay in Silk casriga ah. [More ...]
Sirkeci-Uzunköprü Xuddunta Khasabka ah ee Goobta Dhulka Loo shaqeynayo Natiijada Natiijada Gundhigga
Khadka Sirkeci-Uzunköprü Km: 271 + 000-271 + 200 Dhul-isugeyn Meelmarinta Meelmarinta Shaqeynta Sida Natiijada Tender 2018 / 165422 GCC xadka qiimaha 3.488.489,23 TL iyo qiyaasta qiimaha 4.771.919,72 TL [More ...]